नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सव्दारा अभिकर्ताहरुका लागि एक दिने तालिम | ebaglung.com
२०७५ आश्विन २१, आईतवार ०५:४८	Top News, थप समाचार
बागलुङ २०७५ असोज २१ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स बागलुङको आयोजनामा अभिकर्ताहरुको लागि एक दिने तालिम सम्पन्न भएको छ । बागलुङ जिल्लाका बिभिन्न स्थानका अभिकर्ताहरुलाई लक्षित गरि तालिमको आयोजना गरिएको थियो ।
तालिममा बिमा भनेको केहो ? किन आवश्यक पर्दछ ? र यसको महत्व बारेमा अभिकर्ताहरुलाई जानकारी गराइएको थियो । तालिमको सहजिकरण गर्दै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख महेन्द्र गुरुङले आम नागरिक बिच जीवन बिमा बारे आफु प्रस्ट भई सबैलाई यसबारे सहि रुपमा जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
तालिममा सहभागीहरुले बिमा लहलहैमा नभई राम्रोसंग बुझेरमात्र आफुहरु सबैको माझ पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तालिमको अवसरमा सिनियर एजेन्सि म्यानेजर घनश्याम रिजाल र इन्दिरा भुसाल एजेन्सी प्रदिप पन्तले मन्तव्य दिएका थिए । तालिममा १५ जना अभिकर्ताको सहभागीता रहेको थियो ।
कायक्र्रममा अभिकर्ता एवं नेपाल प्रेस युनियन बागलुङ अध्यक्ष प्रदिप पन्त ,जिल्ला सदस्यमा रामशरण पोखरेल र प्रदेश प्रतिनिधिमा घनश्याम रिजाललाई सम्मान गरिएको थियो ।